Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Brazil » Ndị mba ọzọ kwere ka ha banye na Brazil naanị site na ụgbọelu
Airlines • Airport • Aviation • Akụkọ kacha ọhụrụ na Brazil • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ọbụna ndị njem ọgwụ mgbochi zuru oke nwere ike ịnọ n'ihe egwu maka ịnweta na ịgbasa ụdị COVID-19 dịgasị iche iche ma kwesịrị izere njem niile na Brazil.
Ndị njem kwesịrị izere njem niile na Brazil
Ọ bụrụ na ị ga-aga Brazil, gbaa ọgwụ mgbochi zuru oke tupu njem
Ndị mba ọzọ kwesịrị ịnye ule PCR na-adịghị mma maka COVID-19, emeghị karịa 72 awa tupu ọpụpụ
Ndị ọchịchị Brazil kwupụtara na a na-ekwe ka ndị mba ọzọ si mba ọzọ banye ụgbọelu naanị.
Dị ka akụkọ ndị ahụ si kwuo, e webatara ihe mgbochi ndị ahụ na-arịọ nke Brazil National Sanitary Nnyocha Agency (Anvisa) n'ihe metụtara nsogbu ọrịa na-esi na mgbasa nke ụdị ọhụrụ nke coronavirus na mba ahụ.
Iwu ahụ kwuru na ndị mba ọzọ ga-eweta nnwale PCR na-adịghị mma maka COVID-19, mere karịa awa 72 tupu ịpụ, ka e kwe ka ha banye Brazil.
Na mbu, Onye isi ala Brazil Jair Bolsonaro kpọkuru Courtlọikpe Kasị Elu nke mba ahụ na arịrịọ iji kwupụta mmebi iwu na-ekwekọghị n'ụkpụrụ mmachi emere n'ihi egwu iyi egwu COVID-19 ọhụrụ.
Na July gara aga, Bolsonaro nwetara ọrịa COVID-19 maka oge mbụ. Mgbe ọ gbakere, o kwuru na ọ dịghị mkpa ịtụ egwu coronavirus, ebe ọ bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ niile ga-ebute ya. N’ọnwa Mee 2021, o kwuru na onwere ike ịrịa ọrịa ọzọ.
Dika ntuziaka CDC si kwuo, nke a bu Brazil ugbu a dika 'Ọkwa 4: Ọkwa dị elu nke COVID-19'::
Ndị njem kwesịrị izere njem niile na Brazil.
N'ihi ọnọdụ dị ugbu a na Brazil ọbụlagodi ndị njem ọgwụ mgbochi zuru oke nwere ike ịnọ n'ihe egwu maka ịnweta na ịgbasa ụdị COVID-19 dịgasị iche iche ma kwesịrị izere njem niile na Brazil.
Ndị njem kwesịrị ịgbaso ndụmọdụ ma ọ bụ ihe achọrọ na Brazil, gụnyere mkpuchi mkpuchi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Ọ bụrụ na ị ga-aga Brazil, gbaa ọgwụ mgbochi zuru oke tupu njem.